Dowladda Somalia oo daah-furtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta dalxiiska Dalka (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Somalia oo daah-furtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta dalxiiska Dalka (Sawirro)
Dowladda Somalia oo daah-furtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta dalxiiska Dalka (Sawirro)
Sii hayaha xilka Wasiirka Wasaaradda wafaafinta XFS Mudane; Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa Maanta daah-furay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta Dalxiiska Dalka.
Sii hayaha xilka Wasiirka Wasaaradda warfaafinta XFS, Maxamed Cabdi Xayir ayaa munaasabadda daah-furka ka sheegay in kulankan uu yahay mid Hal maalin ah looguna tala-galay in looga dooda sidii loo horumarin lahaa Dalka, isagoo intaa ku daray ka Wasaarad ahaan ay aad uga xunyihiin dhibaatada ay Argagixisada had iyo jeer u geestaan goobaha Dalxiiska Dalka.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo heli lahaa sharciyo u sahlaya in maal-geliyayaashu ku dhiirradaan in Dalka ay yimaadaan, islmarkaana ay maalgashi ku sameeystaan goobaha Dalxiiska.
“Maanta dalxiis badan ayaa loo yimaadaa waana amaanayaa dhamaan goobaha Dalxiiska dalka oo ay ugu horeeyaan kuwa Gobolka Banaadir, waxaannu ka shaqeyneynaa sidii dalxiiska Dalka loo horumarin lahaa, annaga ka Wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay in aan idin caawinno idinku dhiiro-galino howlahiinna Dalxiiska Dalka’ ayuu yiri Wasiirku.
Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa in dhowaalaba wadday dedaallo lagu dardar gelinayo dib usoo nooleynta Dalxiiska Dalka oo meesha ka baxay wixii ka dambeeyay 1991-dii.
Dowladda Somalia oo daah-furtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta dalxiiska Dalka (Sawirro) was last modified: September 7th, 2020 by Admin
Boqor Salmaan “Waxaan doonaynaa xal caddaalad ah oo loo helo Qadiyadda Falastiin”
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta anxisiyey sharci muhiim ah
Dhageyso:-Ciidmada Booliska Garka KGs Ayaa Al Shabab ay Kula wareegey Deegno Xoos Yimaada Deeganka Goof Gaduud Buurey Ee Gobolka
Joe Biden oo la filayo inuu taariikh cusub ka sameeyo Pentagon-ka